“Modia Ry Zotra MH370 Malaysia Airlines” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Marsa 2014 5:17 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Ελληνικά, 日本語, বাংলা, srpski, polski, 繁體中文, 简体中文, English
Tapaka fifandraisana tamin'ny tompon'andraikitry ny seranam-piaramanidina ny zotra MH370 Malaysia Airlines, an-dalana avy any Kuala Lumpur ho any Beijing tamin'ny 8 Marsa 2014. Amin'izao fotoana anoratana izao dia mbola tsy hita ny voromby mitondra mpandeha 239 ao aminy.
Maro ireo petrakevitra mandehandeha momba ny fanjavonana mahatalanjon'ilay voromby; saingy any amin'ny farany, mbola tsy nahavita nahita ny toerana misy ny voromby ihany ny manampahefana ao amin'ny governemanta ary manome ambangombangom-baovao amin'izay nihatra tamin'ny MH370.
Herinandro mampitaintaina fatratra ho an'ny fianakaviana sy ny naman'ireo mpandeha sy mpiasan'ny MH370 iny herinandro lasa iny. Maro no naneho ny fahadisoam-panantenany sy ny fahatezerany noho ny tsy fahampian'ny vaovao farany momba ny MH370. Ny sasany nitodika tany amin'ny tontolon'ny serasera hanoratra ny tsapany. ho an'i Lokman Mustafa, manantena izy fa mbola hihaona indray amin'ny anabavy tiany:
Ceekay mihetsi-po tamin'ny lahatsoratra Twitter navoakan'i Maira:
Miteraka aingam-panahy ny Malayziana maro hivondrona sy haneho firaisankina amin'ireo havana sy olom-pantatr'ireo mpandeha ny zotra ny MH370. Razlina Yakub manantena ny hisian'ny fahagagana:
Santhini Subramanyah nandrisika ny rehetra mbola hanantena:
Ny diezy #PrayForMH370 no ampiasain'ny mpiserasera hampaherezana sy hanohanana ireo havan'ny mpandehan'ny MH370.